Himalaya Dainik » सुशान्तलाई लागू-औषध कसले खुवाउथे ? खुल्यो यस्तो रहस्य…
सुशान्तको देहत्याग प्रकरणमा उनकी पूर्व प्रेमिका रिया चक्रवर्तीकाे जता ततै जाेडिएकाे छ । यतिबेला सुशान्तको मृत्युको कारण उनी नै भएको धेरैलाइ शंका स्पन्ध भइरहेकाे छ । त्यसैले सुशान्तकाे मृत्यु प्रकरण छानबिन भैरहेको छ ।
पछिल्लो समयमा सुशान्तले नशामा आत्महत्या गरेको खबर पनि बाहिरिएकाे थियाे । अहिले सामाजिक सञ्जालमा रियाले उनका साथीहरुसँग गरेको च्याटका आधारमा भने रियाले नै सुशान्तलाई ड्रग दिने गरेको खुलासा भएको छ ।
प्रमाणले सुशान्तको देहत्याग प्रकरणमा रिया जोडिएको नै बताइरहेको छ, यद्यपि यो कुरामा कति सत्यता छ त्यसको पत्ता भने लाग्दैछ
रियाले २०१७ देखि केही व्यक्तिहरुसँग कुरा गरेको पाइएको छ । जहाँ लागू-औषध सम्बन्धी कुरा भएको छ । यसमा ५ व्यक्ति जोडिएका छन् । रियाले गौरव आर्या, जो ड्रग डिलर हुन्, जया शाह जोसँग रियाको सुशान्तको निधन भएको दिन पनि कुरा भैरहेको थियो । रिया र जयाको च्याट हेर्दा यी दुईले मिलेर सुशान्तलाई कुनै औ-षधी दिने गरेको बुझ्न सकिने भारतीय मिडियाले जनाएको छ । तेस्रो व्यक्ति श्रुति र चौथो मिरान्डा हुन् । यी दुई श्रुति मोदी र स्यामुअल मिरान्डा हो होइनन् भनेर पुष्टि भइसकेको छैन ।
स्यामुअलबारे सुशान्तका कुक निरजले पनि कुरा गरेका थिए कि उनले एक विशेष प्रकारको चुरोट ल्याउँथे । १३ जूनको राती सुशान्तले यो विशेष प्रकारको चुरोट पाएका थिएनन् । पाँचौं पात्र रियाका भाई शोविक चक्रवर्ती हुन् । रिपोर्टका अनुसार जुन ड्र-ग्सको प्रयोग रियाले गरिरहेकी थिइन्, त्यो विशेषगरी हाई–प्रोफाइल पार्टीमा भेटिन्छ ।
यसरी हेर्दा च्याटका अनुसार रियाले सुशान्तलाई कुनै लागू-औषधी दिने गरेको आशंका गरिएको छ । जबकि रियाका वकिलले भने उनले आजसम्म लागू-औषधी नलिएको दाबी गरेका थिए । यदि रियाले लागू-औषध सेवन नै गर्दिनथिन् भने लागू-औषधीको माग किन गर्थिन् त ? यस बिषयमा सीबीअाइले खाेजनीति जारी गरे लगतै छिट्टै सुशान्तकाे मृत्यु प्र-करण कस्काे हात छ भन्ने पत्ता लगाउने बताएका छन् ।